Programmer or Developer - MYSTERY ZILLION
Developer နဲ့ Programmer တွေ မကွဲကြသေးတဲ့သူတွေအရင်ဆုံး dictionary မှာ အဲဒီ စာလုုံး နှစ်လုံးကို ရှာကြည့်သင့်တယ်။
ornagai.com မှာ ရှာထားတဲ့ result ကတော့
Developer (n) : နယ်မြေကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်သူ(သို့)ကုမ္ပဏီ။ (ဖလင်၊ ဓာတ်ပုံ) ပုံဖော်ဆေး။
Programmer (n) : ကွန်ပျူတာအတွက်ညွှန်ကြားချက်ရေးသားပြုစုသူ။
WordNet မှာ ပြထားတဲ့ result တွေကတော့
developer (someone who develops real estate (especially someone who preparesasite for residential or commercial use))
programmer, computer programmer, coder, software engineer (a person who designs and writes and tests computer programs)
လို့ ရေးထားပါတယ်။ wiki မှာဆိုရင်တော့
A programmer, computer programmer or coder, is someone who writes computer software. The term computer programmer can refer toaspecialist in one area of computer programming or toageneralist who writes code for many kinds of software.
A software developer isaperson or organization concerned with facets of the software development process. They can be involved in aspects wider than design and coding,asomewhat broader scope of computer programming oraspecialty of project managing including some aspects of software product management.
ထပ်ရှင်းရရင်တော့ programmer က code ရေးမယ်။ မှားနေတဲ့ဟာတွေ bugs တွေရှိရင် ပြန်ပြင်မယ်ဒီလောက်ပဲ။ Developer အလုပ်ကတော့ development တစ်ခု ပြီးဆုံးအောင်လုပ်ရတယ်။ code ရေးရုံနဲ့ မရဘူး။ Web Developer တစ်ယောက်အနေနဲ့ HTML လည်း ပြင်ရမှာပဲ။ CSS လည်း ပြင်ရမှာပဲ။ code ရေးရုံပဲမဟုတ်ဘူး။ တကယ်လို့ လိုအပ်ရင် server ပေါ်မှာ web application တစ်ခုလုံး run အောင် တင်ပေးရတဲ့ ကိစ္စတွေ လုပ်ရမှာပဲ။ SSH သုံးပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ် backup ကိစ္စတွေ လုပ်ရမှာပဲ။ web developer တစ်ယောက်ရဲ့ knowledge တွေကို
Programmer နဲ့Developer အများကြီး ကွာခြားပါတယ်။ Software Developer တစ်ယောက်အနေနဲ့လည်း ဒီ software ကို တစိတ်တပိုင်း ရေးသားရုံသာမက ဒီ software release ဖြစ်ပြီး installer ထုတ်တဲ့ အထိ ပါရင် ပါရမယ်။ ဒါမှမဟုတ် Client တွေနဲ့ပြောဆိုပြီး ညှိရမယ့် ကိစ္စတွေ ရှိကောင်းရှိတယ်။ Software Development လုပ်နေတာ။ Programming လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ Programming လုပ်တယ်ဆိုတာက computer ရှေ့မှာ ထိုင် code တွေ ရေးလိုက်။ အမှားတွေကို ပြင်လိုက်။ ဒါလေးပဲ လုပ်ရတာပါ။
Programming တတ်တဲ့သူတိုင်း Programmer တစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Developer တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ကတော့ programming knowledge နဲ့တင် မလုံလောက်ပါဘူး။ တကယ့် realworld မှာ Web Programmer ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ Web Developer ပဲရှိတယ်။ Web Development မှာ code ထိုင်ရေး ရတဲ့ အလုပ်တစ်ခုသာမက အခြား ကိစ္စတွေ ပါဆောင်ရွက်ရလို့ပါ။ Software Development မှာကတော့ programmer ကော developer ပါရှိပါတယ်။
Software Engineer ကိုတော့ အခုထက်ထိမတွေ့ရသေးဘူး။ ရုံးမှာလည်း Software Engineer ဆိုပြီး သီးသန့်ခန့်ထားတာ မရှိဘူး။ wiki မှာကတော့
A software engineer isaperson who applies the principles of software engineering to the design, development, testing, and evaluation of the software and systems that make computers or anything containing software, such as computer chips, work.
Software Engineer ဆိုတာ Software Engineering နဲ့ ဘွဲ့ရထားတဲ့ သူကိုခေါ်တာပဲလားတော့ မသိ ။ အားမှပဲ ရှာဖတ်ကြည့်အုံးမယ်။ project manager တွေကတော့ Software Engineering ကို တတ်မြောက် ကျွမ်းကျင်မှသာ project management လုပ်ရတာ အဆင်ပြေမှာပါ။ Software Engineering ကို ကျောင်းမှာ သင်တုန်းကတော့ ပျင်းဖို့ ကောင်းလိုက်တဲ့ subject တရပ်လို့ ဆိုရမလားပဲ။ ကျောင်းက လူတွေခေါ်တာကတော့ ကျက်စာ တဲ့။ SE က တကယ် အခြေခံမပိုင်ပဲ Project Manger ဖြစ်လာခဲ့ရင် တော်တော် ကမောက်ကမ နိုင်တယ်လို့ ဆိုရမယ်။ Risk Managemement တို့ Testing တို့ဆိုတာက ကျောင်းမှာ အလကားသင်တာ မဟုတ်မှန်း အခုမှ သဘောပေါက်တော့တယ်။ တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း စဉ်းစားမိပါတယ်။ ကျောင်းမှာ စာတွေကို သေသေချာချာ ဖတ်ခဲ့ပြီး ဆရာမ သင်တာ ကောင်းသည်ဖြစ်စေ ဆိုးသည် ဖြစ်စေ နားထောင်ဖြစ်ခဲ့ရင် ကောင်းသားလို့။
ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် Developer လား Programmer လား ဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ တချို့ ကျောင်းတုန်းက အချို့လူတွေ ပြောပြောနေတာ တွေ့ဘူးတယ်။ Programmer လုပ်မယ်ဆိုတာကြီးပဲ။ ဘာလို့ Developer မလုပ်ချင်တာလည်းတော့ မသိပါ။
လူတွေကပြောကျတယ် Programming ကိုအရင်လိုက်တဲ ့နောက်မှ Webကိုလိုက်တဲ ့
ဘာလို ့လဲဆိုတော့တဲ ့Programming သမားက တဲ ့Web လိုက်ရင်လွယ်တယ်တဲ့Web သမားက Programming ဆိုမလွယ်တော့ဘူးတဲ ့
Programming သမားက တဲ ့Web လိုက်ရင်လွယ်တယ်တဲ့Web သမားက Programming ဆိုမလွယ်တော့ဘူးတဲ ့
အဲ့ Sense ကိုပါပဲ
သေချာရှင်းအောင် အောက်က ပုံကို ကြည့်ပါ။
ကျွန်တော်လည်း အခုထိ developer နဲ့programmer နဲ ့ကွဲတာကိုအသေအချာမသိထားဘူးဗျ developer ကပိုပြီးမြင့်တယ်လို ့ပဲသိထားတာ
ကျောင်းမှာကလည်းမသိတာကိုမပြောပါနဲ ့ဗျာ ဆရာဆရာမတွေကိုယ်တိုင်ကိုက programmer ဆိုတာ developer ပဲဆိုပြီးတော့သင်ထားတာကိုဗျာ
SE ကတော့ပျင်းဖို ့ကောင်းတာတော့အမှန်ပါ ဒါပေမယ့် project activity diagram လေးတွေဆွဲတာကတော့ ပျော်ဖို ့ကောင်းသလိုပဲ :P
it's very subjective and generalized ... Web ? What web ? Designer ? Developer ? Web Master ? or else .
Programming သမားက တဲ ့Web လိုက်ရင်လွယ်တယ်တဲ့yes.. Agree ( it's more significant with some modern language Python, Ruby , Scala )
Web သမားက Programming ဆိုမလွယ်တော့ဘူးတဲ့.. No agree ..
ခက်တော့နေပြီ နှစ်လုံးထဲနဲ့ရှုပ်နေတယ်။ Software Industry မှာက တစ်ခြားသော Engineering တွေနဲ့ကွာတာက အားလုံးအခြေခံကနေ တက်လာတာပါ။ Civil Engineer or Architect ကအုတ်မစီတတ်ဘူး မဆလာမနယ်တတ်ဘူး။ သို့ပေမယ့် Software Architect က Programming မတတ်ဘူးဆိုတာ ရယ်စရာစကားပဲဗျ။ Programmer, Developer, Software Engineer, Software Architech, System Analyst ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့အားလုံး Program ရေးတတ်ပါတယ်။ Programmer ဆိုတာ Developer မဟုတ်ပေမယ့် Developer ကတော့ Programmer ပါပဲ။ အဲဒီတော့ ဖြစ်ချင်ရင် Programmer ဖြစ်ချင်တာက သဘာဝကျပါတယ် Programmer ဖြစ်ပြီးရင် သူ့ဟာသူ Developer ဖြစ်ချင်လာလိမ့်မပေါ့ Programmer မဖြစ်သေးပဲနဲ့ Developer ဘာလဲကွဲပြားစွာနားလည်ဖို့ အခက်အခဲရှိလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်လည်း ဝင်ငြင်းဦးမယ်ဗျာ ။ ဒီအခေါ်အဝေါ်လေး နှစ်ခုနဲ. ပါတ်သတ်လို. ။ ကို @saturngod ပြောသွားတဲ့ Programmer ဆိုတာ ကုတ်လေးရေးလိုက် မှားတာလေး ပြင်လိုက်ဆိုတာကို သဘောမတူဘူးဗျ ဟဲ ... ဟဲ ။ စိတ်မရှိနဲ.နော် ခင်ဗျားတို.က ကျွန်တော့်ထက်စာရင် အများကြီးအတွေ.အကြုံ ရှိကြမှာပါ ။ကျွန်တော်က ငမျောက် ငချောက်ရယ်။ ကျွန်တော်တို. ဆီမှာ ဆိုရင်တော့ Web project တစ်ခုကို develop လုပ်တဲ့ နေရာမှာ DAO အပိုင်းကို တာဝန်ယူတဲ့ သူကို DB Administrator လို.ခေါ်တယ်ဗျ ။ HTML , CSS အပိုင်းကို တာဝန်ယူတဲ့သူကိုတော့ Web Designer လို.ခေါ်တယ်ဗျ ။ ကျွန်တော်တို. Programmer ကတော့ ကုတ်ရေးတဲ့ အပိုင်း ၊ Testing လုပ်တဲ့အပိုင်း ၊ Web Flow အပိုင်း ၊ Performance အပိုင်း ၊ Security အပိုင်း ၊ Scripting အပိုင်း တွေ တာဝန်ယူရတယ်ဗျ။
Organization တစ်ခုနဲ. တစ်ခု တည်ဆောက်ပုံ မတူတဲ့ အတွက် ခေါ်ဆိုကြပုံလည်း မတူကြဘူးလို.ထင်ပါတယ်။ အခု မြန်မာပြည်မှာ အောင်မြင်နေတဲ့ ACE တို. MIT တို.မှာ ဆိုရင်တော့ Project leader , Software Engineer (SE), Software Engineer Leader (SE leader), Project Manger(PM) , Programmer Leader , Programmer , Tester , Designer စသည်ဖြင့် ရှိကြပေမယ့် တစ်ခြား ကုမ္ပဏီမှာတော့ ရှိချင်မှ ရှိကြပေလိမ့်မယ်ဗျ။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်က ဒါတွေကို အခေါ်အဝေါ် တွေ ပိုင်းခြားမှုသက်သက်သာလို.ပဲ မြင်ပါတယ်။ ဒါတွေကို ဘယ်လောက် level ရှိသူဆို ဘာလို. ခေါ်လို.တော့ ဘယ်လိုတွေ ပိုင်းခြားထားသလဲ ကျွန်တော်သေချာမသိပါဘူး ။ နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်ပြောချင်တာက .....
အဲ့ဒီ့ အခေါ်အဝေါ်ပေါ်မူတည်ပြီး အထင်ကြီးခြင်း ၊ သေးခြင်းလည်း မရှိပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ သူတို.တွေ ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပုံခြင်းမတူကြလို.ပါ။